🍽️Cun oo cab | Booqo Hultsfred
Isku dhadhamiya agagaarka degmada!
Miyi, u dhow harada, guriga lagu dubay, bartamaha… halkan waxaa yaal wax la cuno oo la cabbo dhadhan kasta. Qaado qaxwo, casho wanaagsan ama isku dawee pizza.
Cunnooyinka si fiican loo kariyey badanaa waxay ka kooban yihiin maaddooyinka iswidhishka. Makhaayada waa laga dalban karaa xafladaha gaarka loo leeyahay, sidoo kale waa suurtagal in wax la cunteeyo. Annika waxay leedahay mid weyn
Lönnebergaboa, cuntada waa inay had iyo jeer noqotaa wax aad la wadaagto asxaabtaada, iyo booqashadaadu inay noqoto wax aan caadi ahayn, waxaan xilli
Makhaayad Shiine-Fiitnaam ah oo leh Shiine iyo Fiyatnaamiis dhaqameed. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah suxuun kala duwan, cunto karinta guryaha Iswiidhishka ah, á la carte iyo
Haddii aad u baahan tahay inaad wax hesho si dhakhso leh, Sibylla waa silsilad caan ah oo caan ah. Sibylla waxay bixisaa wax kasta oo ka soo jeeda qowmiyadaha Iswiidhishka ah "oo rootiga lagu kariyo" (yacni bolse la kariyey)
Guriga hilibka lagu dubto
Wadada wareega ee Målilla waxaa ku yaalo Grillstugan halkaana burgers iyo sausages waxaa lagu siiyaa mash iyo waxyaalo kale, iyo sidoo kale jalaato. Marka cimiladu saamaxdo, way jirtaa